Madaxweyne Xasan “Caalamku waa ka soo baxay Kaalintii aan ugaga Baahneyn Tii Dadka Somaliyedbaa hartay” – SBC
Madaxweyne Xasan “Caalamku waa ka soo baxay Kaalintii aan ugaga Baahneyn Tii Dadka Somaliyedbaa hartay”
Posted by Webmaster on May 11, 2013 Comments
Madaxweynaha Dowlada Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlayay Xaflad ka dhacday Magaalada Brimingham ee dalkaasi Ingiriiska ayaa waxa uu kula dar daarmay Shacabka Soomaaliyeed meelkasta oo ay joogaan isagoo u sheegay in la soo gaaray Dowrkii ay lahaayeen in ay ka soo dhalaalaan.
Waxa uu Xasan Sheekh Maxamuud sheegay in Beesha Caalamka ay ka soo baxday Kaalinteedii kaga aadaneyd Soomaaliya balse bulshada Soomaaliyeed loogaga fadhiyo sidii ay uga faa iideysan lahaayeen taageeradaas loo fidiyay .
Waxa uu Intaasi Raaciyay Madaxweynuhu in loo baahan yahay in Umada Soomaaliyeed Gacmaha isqabsadaan, muujiyaan Iscafis iyo hor u socod.
“Dunida Meelkastoo aan tagnay Waxii aan weydiisanay Waan ka helnay, Laakiin weli waxaan taaganahay meeshii aan taagneyn, Anagaa nalaka rabaa in aan dowlad dhisano, heshiino, Gacmaha isqabsano kana fekerno Horumarka” ayaa ka mid ahaa Hadaladii Madaxweyne Xasan uu sheegay.
Madaxweynaha Qudbadiisa oo aheyd mid dhinacyo badan taabaneysay ayaa sidoo kale waxa uu kaga hadlay dhinacyada Siyaasada Amniga, iyo Horumarka, waxaanu sheegay ka Dowlad ahaan ka soo bixi doonto waajibaadkeeda balse loogaga baahanyahay in loo muujiyo Dulqaad iyo taageero.
Madaxweynaha Soomaaliya iyo wafdi uu horkacayo ayaa maalmihii ugu dambeeyay Safaro ku maraya magaalooyin kuyaala dalkaasi Ingiriiska waxaana uu kulamo la qaadanayay Jaaliyada SOomaaliyeed ee ku dhaqan gobolada Dalkaasi .